Horudhac: Chelsea vs Watford… (Macallinka Blues ee Frank Lampard oo uu gaar u yahay kulankan) – Gool FM
(London) 04 Luulyo 2020. Naadiga Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhoweyn doonta kooxda Watford, iyagoo maanka ku haya inay u baahan yihiin saddex dhibcood si ay u sii xajisteen booska afaraad ee kala sarraynta Premier League.
Iyadoo ay taasi jirto, Watford ayaa safar u galeysa galbeedka London, iyagoo u baahan guul si ay afar dhibcood ugu jirsadaan boosaska loogu laabto heerka labaad xilli fasal ciyaareedka uu ka harsan yahay shan kulan.
Chelsea ayaa caawa weyneysa laacibkeeda khadka dhexe ee Mateo Kovacic kaasoo dhaawac dhanka feysha ah qaba.
Macallin Frank Lampard ayaa sidoo kale xaqiijiyay in difaaciisa dhallinyarada ah ee Fikayo Tomori uu dhaawac ku seegayo kulankan.
Watford ayaa dib ugu yeertay saddexdeeda ciayaryahan ee kala ah Gray, Nathaniel Chalobah iyo Domingos Quina, kuwaasoo dhammaantood toddobaadkii tagay sababo anshaxa la xiriira looga reebay safkii naadiga.
Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat iyo Isaac Success ayaa ah xiddigaha sida cad uga maqnaan doona kooxda Hornets.
>- Watford ayaa guuleysatay kaliya hal kulan,13 kalena la garaacay 17-kii kulanee ugu dambeeyay oo ay isku arkaan horyaalka iyo FA Cup-ka.
>- Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah 12-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Hornets tan iyo khasaarihii 5-1 ahaa ee soo gaaray bishii Maajo ee sanadkii 1986-kii, wixii markaas ka dambeeyay naadiga reer London ayaa adkaatay siddeed jeer, afar jeerna waxay ku kala tageen barbarro.
>- Watford ayaa laga dhaliyay 11 gool saddexdii ciyaar ee ugu dambeysay oo ay booqatay garoonka Stamford Bridge.
>- Chelsea ayaa guul gaartay saddex kulan oo xiriir ah oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Si kastaba ha ahaatee, Blues ayaa guuldarreysatay siddeed kulan oo ay bannaanka ku soo ciyaartay dhammaan tartammada xilli ciyaareedkan, waana rikoorkoodii ugu xumaa tan iyo fasal ciyaareedkii 1985-86.
>- Waa markii labaad oo ay Chelsea guuldarreysanayo 10 kulan oo horyaal ah inta uu jiro xukunka Roman Abramovich, waxaana horraan 12 kulan la garaacay fasal ciyaareedkii 2015-16.
>- Goolasha 44-ka ah ee Chelsea looga dhaliyay Premier League, waxay 29 ka mid ah dhasheen qaybta labaad ee ciyaarta.
>- The Blues ayaa sidoo kale lumisay 18 dhibcood, iyagoo hoggaanka ciyaarta qabtay.
>- Tammy Abraham oo 13 gool ka dhaliyay Premier League xilli ciyaareedkan, isla markaasna ah gooldhaliyaha ugu sarreeya ee kooxdiisa ayaa ku fashilmay inuu shabaqa gaaro toddobadii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Frank Lampard ayaa garaacay Watford dhammaan shantii kulan ee uu kaga hor tagay Premier League, waxaana afar ka mid ah kulammadaas uu ahaa ciyaaryahan, halka hal jeer uu guul ka gaaray isagoo macallin ah.
>- Macallin Lampard ayaa u dabaal dagaya kulankan sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii loo magacaabay tababaraha Chelsea.
>- Watford ayaa guul gaartay kaliya hal ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay Premier League ka ciyaartay, waxay barbaro gashay saddex jeer, halka lix kulan la garaacay, waana guul la’aan afartii ciyaar ee ugu dambeysay horyaalka.
>- Waxay sidoo kale guuleysteen kaliya labo jeer, 16 kulan oo ay horyaalka ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda xilli ciyaareedkan, iyagoo afar barbaro galay, 10 kalena la garaacay, waxaana labadaas guul ay ka gaareen kooxaha liita ee Norwich iyo Bournemouth.
>- Kooxda lagu naaneyso The Hornets ayaa gool weysay siddeed kulan oo ay bannaanka ku soo ciyaareen, waxaana ku jira saddexdii ugu dambeeyay, waxaa intaas u sii dheer inay dhaliyeen kaliya saddex gool qaybaha labaad ee ciyaarta dhammaan kulammadii fasalkan, halka laga dhaliyay 17 gool, iyagoo aanan gool ka soo dhalin kooxaha lixda waa weyn ciyaarihii ay booqdeen.
>- Watford ayaa dhalisay kaliya 29 gool xilli ciyaareedkan, waxaana ka gool dhalis yar kooxaha Crystal Palace iyo Norwich.
>- Haddii Ben Foster uu ciyaartan dheelo, waxa uu noqon doonaa xiddigii siddeedaad ee Watford u safta 100 kulan oo horyaalka Premier League ah.